လကျရှိ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံး ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ၁၀ ဦး - Thutazone
လကျရှိ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံး ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ၁၀ ဦး
ဟောလိဝုဒျတှငျ အောငျမွငျထငျရှားလာသညျ့ မငျးသားတဈလကျ အနဖွေငျ့ သရုပျဆောငျကွေး ဒျေါလာသနျးနှငျ့ခြီ ရရှိတတျသညျမှာ မဆနျးလှခြေ။ သရုပျဆောငျ ဘဝတှငျ အောငျမွငျစှာ ရပျတညျနိုငျသညျ့ ကာလရှညျကွာလာသောအခါ စုဆောငျးပိုငျဆိုငျထားသညျ့ ငှကွေေးပမာဏသညျလညျး ပိုမိုမြားပွား ကွှယျဝလာလရှေိ့သညျ။
ထို့ကွောငျ့လညျး ရုပျရှငျလောကတှငျ ကာလရှညျကွာ ကငျြလညျခဲ့သော ဝါရငျ့မငျးသား အမြားအပွားသညျ ယခုအခါ ဒျေါလာသနျးပေါငျး ရာနှငျ့ခြီ ကွှယျဝသညျ့ သူဌေးမြားအဖွဈ ရပျတညျလကျြ ရှိကွသညျ။ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံး ရုပျရှငျမငျးသားမြားတှငျ အကျရှငျစတားမြား၊ ဇာတျမွူးသရုပျဆောငျမြား၊ ခြောမောခံ့ညားသူမြား၊ အျောစကာဆုနှငျ့ အကြှမျးတဝငျ ရှိသူမြား ပါဝငျနသေညျ။
ကမ်ဘာပျေါတှငျ အခမျြးသာဆုံး ရုပျရှငျမငျးသား (၁၀)ဦးကို ရှေးထုတျလိုကျသညျ့အခါ ဟောလိဝုဒျ ကွယျပှငျ့မြားကသာ အဓိက လှမျးမိုး နရောယူထားသညျ။ ထူးခွားခကျြမှာ ဘောလီးဝုဒျမှ အိန်ဒိယမငျးသား ရှရှတျခနျးက ဟောလိဝုဒျ မငျးသား အမြားအပွားကို ကြျောဖွတျကာ ထိပျပိုငျးအဆငျ့၌ ရပျတညျနခွေငျး ဖွဈသညျ။
အသကျ(၈၈)နှဈ ရှိပွီဖွဈသော ဝါရငျ့မငျးသားကွီး အနဖွေငျ့ (၁၉၅၀)ပွညျ့လှနျ နှဈမြားကတညျးက ဟောလိဝုဒျတှငျ စတငျကငျြလညျနခေဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။ ဟောလိဝုဒျ သမိုငျးတှငျ သကျရှိထငျရှား ဂန်ထဝငျ တဈဦးအဖွဈ သတျမှတျခံရသညျ့ ကလငျ့အိဈဝုဒျသညျ လကျရှိအခြိနျတှငျမူ ဒါရိုကျတာ နယျပယျသို့ ကူးပွောငျးပွီး အောငျမွငျမှုမြား ရှာဖှလေကျြ ရှိသညျ။ ၂၀၀၈ ခုနှဈက ၎င်းငျးကိုယျတိုငျ သရုပျဆောငျပွီး ဒါရိုကျတာ အနဖွေငျ့ရော ထုတျလုပျသူ အဖွဈပါ တာဝနျယူခဲ့သညျ့ ဇာတျကားသညျ ဒျေါလာသနျးပေါငျး ၂၇၀ မြှအထိ ဝငျငှရေရှိခဲ့သညျ။ ၎င်းငျး၏ လကျရှိကွှယျဝမှုသညျ ဒျေါလာ ၃၇၅ သနျး ပမာဏမြှ ရှိသညျ။
သူ၏ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးလုပျငနျးကို ကာယအလှမောငျအဖွဈ စတငျခဲ့သော မငျးသားကွီး အာနိုးသညျ ရုပျရှငျလောကသို့ ၁၉၆၉ ခုနှဈကတညျးက ဟာကြူလီကားရိုကျရငျး ဝငျရောကျခဲ့သညျ။ သူသညျ ကမ်ဘာကြျော ရုပျရှငျမငျးသားအဖွဈသာမက ရုပျရှငျဒါရိုကျတာ ၊စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ၊ ရငျးနှီးမွုပျနှံသူ၊ စာရေးဆရာ၊ နာမညျကြျောပရဟိတအလှူရှငျ၊ နိုငျငံရေးသမားစတဲ့ မတူညီတဲ့နယျပယျတှမှောလညျး အောငျမွငျစှာရပျတညျနိုငျသူဖွဈသညျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈအရ မငျးသားကွီးအာနိုး၏ ကွှယျဝမှုမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၄၀၀ ဖွဈသညျ။
၈။ ဆီဗကျစတာ စတားလုံး
ရော့ကီး ၊ ရမျဘို ဟု လူသိမြားသညျ့ ဆဲဗားစတားလုံးသညျ ဇာတျရုံဧညျ့ကွို ၊ တိရစ်ဆာနျရုံစောငျ့ စသညျ့အလုပျမြားလုပျရငျး သာမနျဗီဒီယိုကားမြားကို ရိုကျကူးခဲ့သူဖွဈသညျ။ သူ့အားအောငျမွငျစခေဲ့သော ဇာတျကားမှာ သူကိုယျတိုငျရေးသညျ့ Rocky ဇာတျကားဖွဈသညျ။ အစပိုငျးတှငျ သူ၏ရုပျရညျနှငျ့ ဟနျပနျအမူအရာမြားကွောငျ့ မညျသညျ့ ထုတျလုပျသူမှ လကျမခံခဲ့သော စတားလုံးသညျ ကမ်ဘာ့နာမညျအကွီးဆုံး မငျးသားတဈလကျ ဖွဈလာသညျ အထိအောငျမွငျခဲ့သညျ။ လကျရှိ ၂၀၁၈စာရငျးအရ ဆီဗကျစတာ စတားလုံး၏ ကွှယျဝမှုမှာ ဒျေါလာ ၄၀၀ သနျး ဖွဈသညျ။
စိတျဖောကျပွနျနသေကဲ့သို့၊ ပုံမှနျစိတျအနအေထား မရှိသူ တဈဦးကဲ့သို့ သရုပျဆောငျပွသညျ့အခါ ဂကျြနဈကိုလျဆနျကို ယှဉျပွိုငျနိုငျသူ မရှိသလောကျရှားကွောငျး ဟောလိဝုဒျတှငျ အသိအမှတျ ပွုထားကွသညျ။ နဈကိုလျဆနျသညျ အျောစကာ ဆနျခါတငျ အဆငျ့တှငျ (၁၂) ကွိမျ အမညျတငျသှငျး ခံခဲ့ရပွီး ယငျးသညျ အမြိုးသား သရုပျဆောငျ တဈဦးအတှကျ အရအေတှကျ အမြားဆုံး စံခြိနျလညျး ဖွဈခဲ့သညျ။ ယငျးတို့အနကျမှ (၃) ကွိမျတှငျ ၎င်းငျးအနဖွေငျ့ အျောစကာဆုကို လကျတှဆှေ့တျခူး ရယူနိုငျခဲ့သညျ။ နဈကိုလျဆနျသညျ ဆယျစုနှဈ ငါးခုဆကျတိုကျ အျောစကာ ဆနျခါတငျအဆငျ့ ပါဝငျသတျမှတျခံရသညျ့ မငျးသားတဈလကျ အဖွဈလညျး မှတျတမျးတငျနိုငျခဲ့သေးသညျ။ ၁၉၈၉ ခုနှဈက ရုံတငျခဲ့သညျ့ Batman ဇာတျကားတှငျ Jokerအဖွဈ အစှမျးပွ သရုပျဆောငျသှားသညျ့ မငျးသားကွီး၏ ကွှယျဝမှုမှာ ဒျေါလာသနျးပေါငျး ၄၀၀ မြှ ရှိသညျ။
၆။ အမီတာ ဘဂမျြး
ကမ်ဘာပျေါတှငျ လူသိအမြားဆုံး အိန်ဒိယရုပျရှငျမငျးသားကွီးဖွဈသလို လကျရှိအခြိနျအထိ ဘောလိဝုဒျရုပျရှငျလောကတှငျ သွဇာလှမျးမိုးထားနိုငျသူဖွဈသညျ။ ၁၉၆၉ခုနှဈကတညျးက ရုပျရှငျလောက ကို ဝငျရောကျခဲ့သူဖွဈပွီး Agneepath ၊ Sharaabi ၊ Baghban စသညျ့ ဇာတျကားမြားဖွငျ့ သူ့ခတျေသူ့အခါက အလှနျအောငျမွငျခဲ့သညျ။ အသကျ ၇၅နှဈ ရှိပွီဖွဈသျောလညျး ယခုတိုငျ အနုပညာလုပျငနျးမြားကို လုပျကိုငျနဆေဲဖွဈသညျ။ သူ၏ ကွှယျဝမှုမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၀၀ သနျး ဖွဈသညျ။
၅။ Adam Sandler
Adam Sandler ကတော့ အမရေိကနျ သရုပျဆောငျ နဲ့ ထုတျလုပျသူ တဈဦးဖွဈပွီး တခြိနျက ဟောလိဝုဒျရဲ့ ဝငျငှအေမွငျ့ဆုံးမငျးသား တဈလကျဖွဈခဲ့သူပါ။ ၁၉၈၇ခုနှဈကတညျးက ယခုအခြိနျအထိ ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာ ရိုကျကူးခဲ့ပွီး သူ၏ Grown Ups ဇာတျကားသညျ box office တှငျ ဝငျငှေ ဒျေါလာ ၂၇၁ သနျး ရရှိသညျအထိ အောငျမွငျခဲ့သညျ။ ထိုရုပျရှငျတှငျ သူသညျ ဝငျငှအေမွငျ့ဆုံးရခဲ့ပွီး လကျရှိ သူ၏ ကွှယျဝမှုမှာ ဒျေါလာ သနျး ၄၂၀ ဖွဈသညျ။
အကျရှငျဇာတျကောငျမြားနှငျ့ လူသိမြားသော အမရေိကနျ သရုပျဆောငျ ၊ ဒါရိုကျတာ မဲလျဂဈဘျဆငျသညျ ၁၉၇၆ခုနှဈကတညျးက ပွဇာတျမြားတှငျပါဝငျရငျး အနုပညာလောက ထဲသို့ဝငျရောကျခဲ့သူ ဖွဈသညျ။ သရုပျဆောငျအဖွဈသာ မက ဒါရိုကျတာ အဖွဈပါ အောငျမွငျသူဖွဈသညျ။ သူသရုပျဆောငျသညျ့ Braveheart နှငျ့ The Man WithoutaFace ဇာတျကားမြားက လူသိမြားသလို ကမ်ဘာ့လူကွိုကျအမြားဆုံးဇာတျကား တဈကားဖွဈသညျ့ Hacksaw Ridge ကိုလညျး ဒါရိုကျတာအဖွဈရိုကျကူးခဲ့သူဖွဈသညျ။ ၂၀၁၈ခုနှဈ စာရငျးအရ သူ၏ ကွှယျဝမှုမှာ ၄၂၅သနျး ဖွဈသညျ။
ဟောလိဝုဒျ၏ ထငျရှားသော မငျးသား ၊ ဒါရိုကျတာဖွဈပွီး ရှကေမ်ဘာလုံးဆု ၃ဆု ၊ အျောစကာ ၂ဆု ရရှိခဲ့သညျအထိအောငျမွငျခဲ့သူဖွဈသညျ။ O Brother, Where Art Thou? ၊ Ocean’s Eleven ၊ Up in the Air ၊ Three Kings နှငျ့ Syriana စသညျ့ဇာတျကားမြားမှာ သူ၏ လူကွိုကျအမြားဆုံး အအောငျမွငျဆုံး ဇာတျကားမြားဖွဈသညျ။ ရုပျရှငျသိပျမရိုကျတော့သျောငွား အခွားစီးပှားရေးလုပျငနျးမြားဖွငျ့ အောငျမွငျနသေူဖွဈသညျ။ ၂၀၁၈ခုနှဈ စာရငျးအရ သူ၏ ကွှယျဝမှုမှာ ဒျေါလာ သနျး ၅၀၀ ဖွဈသညျ။
တှမျခရုဈ၏ အမညျကို ကွားမိလိုကျသညျနှငျ့ မီးလောငျပေါကျကှဲမှုမြား၊ အဝေးပွေးလမျးပျေါတှငျ ကားအပွိုငျမောငျးရငျး အပွနျအလှနျ ပဈခတျနမှေုမြား၊ ရဟတျယာဉျပျေါမှ ခုနျခပြွီး စှနျ့စားတိုကျခိုကျမှုမြားကို မွငျယောငျမိလာမညျ ဖွဈသညျ။ အကျရှငျမငျးသား တဈလကျအဖွဈ အထူးအောငျမွငျခဲ့သညျ့ ခရုဈသညျ ရိုကျကူးဖူးသမြှ ဇာတျကားအားလုံးအနကျ အရအေတှကျ ၂၀ ကို ဒျေါလာသနျး ၂၀၀ ကြျောစီ အကြိုးအမွတျ ဖွဈထှနျးစခေဲ့ဖူးသညျ့ မှတျတမျးကောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားသညျ။ ၎င်းငျးသညျ Top Gun၊ Mission Impossibleတို့ကဲ့သို့ အကျရှငျဇာတျကွမျးမြားအပွငျ Rain Man၊ Eyes Wide Shutတို့ကဲ့သို့ Drama ဇာတျလမျးမြား၌ပါ ပီပွငျစှာ သရုပျဆောငျပွခဲ့သူ ဖွဈသညျ။ ဟောလိဝုဒျ ဒါရိုကျတာမြားကမူ ခရုဈကို ရှေးခယျြခွငျးသညျ အဆုံးအရှုံး မရှိရနျ အာမခံခကျြ တဈခုအဖွဈ ယူဆလေ့ ရှိကွသညျ။ ၎င်းငျးသညျ ဒျေါလာသနျး ၅၇၀ မြှ ခမျြးသာနပွေီ ဖွဈသညျ။
ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ တဈဦးအနဖွေငျ့ ကွှယျဝခမျြးသာမှု ကဏ်ဍတှငျ တှမျခရုဈထကျ ရှရှတျခနျးက သာလိမျ့မညျဟု ယူဆသူ မြားမြားစားစား မရှိနိုငျလောကျခြေ။ သို့သျောလညျး ယငျးအခကျြမှာ အမှနျပငျ ဖွဈသညျ။ အိန်ဒိယ ရုပျရှငျလောက၏ မီးရှူးတနျဆောငျသဖှယျ ဖွဈနသေော မငျးသားသညျ အခဈြ၊ အလှမျး၊ အကွမျး၊ အမွူး ဇာတျရုပျမြိုးစုံဖွငျ့ ဘောလီးဝုဒျ၏ လူကွိုကျအမြားဆုံး ဇာတျကားကွီး ၅၀ ကြျော၌ ပါဝငျ သရုပျဆောငျခဲ့သညျ။ ခနျး၏ အောငျမွငျမှု ပုံရိပျသညျ ဘောလီးဝုဒျတှငျသာ မကဘဲ တဈကမ်ဘာလုံး အတိုငျးအတာထိ ကယျြပွနျ့လာအောငျ ထိုးဖောကျနိုငျခဲ့သညျ။ ခနျးသညျ ပရဟိတ လှုပျရှားသူ တဈဦးအနဖွေငျ့လညျး လူသိမြားပွီး လူသားအကြိုးပွု လုပျငနျးမြားစှာတှငျ ပါဝငျကူညီလရှေိ့သညျ။ Newsweek မဂ်ဂဇငျးက ကမ်ဘာပျေါတှငျ ဩဇာအကွီးဆုံး လူပုဂ်ဂိုလျ ၅၀ စာရငျး၌ ထညျ့သှငျးရှေးခယျြခဲ့ဖူးသော မငျးသားသညျ စုစုပေါငျး ဒျေါလာသနျး ၆၀၀ မြှ ကွှယျဝခမျြးသာကွောငျး သိရသညျ။
( တခြို့စာရငျးမြားတှငျတော့ ဂယျြရီဆိနျးဖဲလျ ကို နံပါတျ ၁ အဖွဈဖျောပွကွသညျ။ သူ၏ ကွှယျဝမှုမှာ ဒျေါလာ သနျး ၉၂၀ ဖွဈသညျ။ သို့သျော ဆိနျးဖဲလျ သညျ ရုပျရှငျမငျးသား ၊ ဒါရိုကျတာဆိုသညျထကျ ရုပျသံဇာတျလမျးမြား ၊ စီးရီးမြား ရိုကျကူးထုတျလုပျရငျး ကွှယျဝလာခဲ့သူဖွဈသညျ့အတှကျ ဒီစာရငျးတှငျ မထညျ့လိုကျခွငျးဖွဈသညျ။)
Ref: The 20 Richest Actors in the World 2019 – Wealthy Gorilla
လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ၁၀ ဦး
ဟောလိဝုဒ်တွင် အောင်မြင်ထင်ရှားလာသည့် မင်းသားတစ်လက် အနေဖြင့် သရုပ်ဆောင်ကြေး ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ ရရှိတတ်သည်မှာ မဆန်းလှချေ။ သရုပ်ဆောင် ဘဝတွင် အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်သည့် ကာလရှည်ကြာလာသောအခါ စုဆောင်းပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ငွေကြေးပမာဏသည်လည်း ပိုမိုများပြား ကြွယ်ဝလာလေ့ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ရုပ်ရှင်လောကတွင် ကာလရှည်ကြာ ကျင်လည်ခဲ့သော ဝါရင့်မင်းသား အများအပြားသည် ယခုအခါ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ ကြွယ်ဝသည့် သူဌေးများအဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိကြသည်။ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ရုပ်ရှင်မင်းသားများတွင် အက်ရှင်စတားများ၊ ဇာတ်မြူးသရုပ်ဆောင်များ၊ ချောမောခံ့ညားသူများ၊ အော်စကာဆုနှင့် အကျွမ်းတဝင် ရှိသူများ ပါဝင်နေသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး ရုပ်ရှင်မင်းသား (၁၀)ဦးကို ရွေးထုတ်လိုက်သည့်အခါ ဟောလိဝုဒ် ကြယ်ပွင့်များကသာ အဓိက လွှမ်းမိုး နေရာယူထားသည်။ ထူးခြားချက်မှာ ဘောလီးဝုဒ်မှ အိန္ဒိယမင်းသား ရှရွတ်ခန်းက ဟောလိဝုဒ် မင်းသား အများအပြားကို ကျော်ဖြတ်ကာ ထိပ်ပိုင်းအဆင့်၌ ရပ်တည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အသက်(၈၈)နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ဝါရင့်မင်းသားကြီး အနေဖြင့် (၁၉၅၀)ပြည့်လွန် နှစ်များကတည်းက ဟောလိဝုဒ်တွင် စတင်ကျင်လည်နေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဟောလိဝုဒ် သမိုင်းတွင် သက်ရှိထင်ရှား ဂန္ထဝင် တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့် ကလင့်အိစ်ဝုဒ်သည် လက်ရှိအချိန်တွင်မူ ဒါရိုက်တာ နယ်ပယ်သို့ ကူးပြောင်းပြီး အောင်မြင်မှုများ ရှာဖွေလျက် ရှိသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ၎င်းကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ပြီး ဒါရိုက်တာ အနေဖြင့်ရော ထုတ်လုပ်သူ အဖြစ်ပါ တာဝန်ယူခဲ့သည့် ဇာတ်ကားသည် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၂၇၀ မျှအထိ ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏ လက်ရှိကြွယ်ဝမှုသည် ဒေါ်လာ ၃၇၅ သန်း ပမာဏမျှ ရှိသည်။
သူ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကို ကာယအလှမောင်အဖြစ် စတင်ခဲ့သော မင်းသားကြီး အာနိုးသည် ရုပ်ရှင်လောကသို့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်ကတည်းက ဟာကျူလီကားရိုက်ရင်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည် ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသားအဖြစ်သာမက ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၊ စာရေးဆရာ၊ နာမည်ကျော်ပရဟိတအလှူရှင်၊ နိုင်ငံရေးသမားစတဲ့ မတူညီတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာလည်း အောင်မြင်စွာရပ်တည်နိုင်သူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အရ မင်းသားကြီးအာနိုး၏ ကြွယ်ဝမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ဖြစ်သည်။
၈။ ဆီဗက်စတာ စတားလုံး
ရော့ကီး ၊ ရမ်ဘို ဟု လူသိများသည့် ဆဲဗားစတားလုံးသည် ဇာတ်ရုံဧည့်ကြို ၊ တိရစ္ဆာန်ရုံစောင့် စသည့်အလုပ်များလုပ်ရင်း သာမန်ဗီဒီယိုကားများကို ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူ့အားအောင်မြင်စေခဲ့သော ဇာတ်ကားမှာ သူကိုယ်တိုင်ရေးသည့် Rocky ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် သူ၏ရုပ်ရည်နှင့် ဟန်ပန်အမူအရာများကြောင့် မည်သည့် ထုတ်လုပ်သူမှ လက်မခံခဲ့သော စတားလုံးသည် ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး မင်းသားတစ်လက် ဖြစ်လာသည် အထိအောင်မြင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ ၂၀၁၈စာရင်းအရ ဆီဗက်စတာ စတားလုံး၏ ကြွယ်ဝမှုမှာ ဒေါ်လာ ၄၀၀ သန်း ဖြစ်သည်။
စိတ်ဖောက်ပြန်နေသကဲ့သို့၊ ပုံမှန်စိတ်အနေအထား မရှိသူ တစ်ဦးကဲ့သို့ သရုပ်ဆောင်ပြသည့်အခါ ဂျက်နစ်ကိုလ်ဆန်ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သူ မရှိသလောက်ရှားကြောင်း ဟောလိဝုဒ်တွင် အသိအမှတ် ပြုထားကြသည်။ နစ်ကိုလ်ဆန်သည် အော်စကာ ဆန်ခါတင် အဆင့်တွင် (၁၂) ကြိမ် အမည်တင်သွင်း ခံခဲ့ရပြီး ယင်းသည် အမျိုးသား သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးအတွက် အရေအတွက် အများဆုံး စံချိန်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ (၃) ကြိမ်တွင် ၎င်းအနေဖြင့် အော်စကာဆုကို လက်တွေ့ဆွတ်ခူး ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ နစ်ကိုလ်ဆန်သည် ဆယ်စုနှစ် ငါးခုဆက်တိုက် အော်စကာ ဆန်ခါတင်အဆင့် ပါဝင်သတ်မှတ်ခံရသည့် မင်းသားတစ်လက် အဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သေးသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က ရုံတင်ခဲ့သည့် Batman ဇာတ်ကားတွင် Jokerအဖြစ် အစွမ်းပြ သရုပ်ဆောင်သွားသည့် မင်းသားကြီး၏ ကြွယ်ဝမှုမှာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၄၀၀ မျှ ရှိသည်။
၆။ အမီတာ ဘဂျမ်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသိအများဆုံး အိန္ဒိယရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဖြစ်သလို လက်ရှိအချိန်အထိ ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးထားနိုင်သူဖြစ်သည်။ ၁၉၆၉ခုနှစ်ကတည်းက ရုပ်ရှင်လောက ကို ဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး Agneepath ၊ Sharaabi ၊ Baghban စသည့် ဇာတ်ကားများဖြင့် သူ့ခေတ်သူ့အခါက အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အသက် ၇၅နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ယခုတိုင် အနုပညာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူ၏ ကြွယ်ဝမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀ သန်း ဖြစ်သည်။
Adam Sandler ကတော့ အမေရိကန် သရုပ်ဆောင် နဲ့ ထုတ်လုပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တချိန်က ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးမင်းသား တစ်လက်ဖြစ်ခဲ့သူပါ။ ၁၉၈၇ခုနှစ်ကတည်းက ယခုအချိန်အထိ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး သူ၏ Grown Ups ဇာတ်ကားသည် box office တွင် ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၇၁ သန်း ရရှိသည်အထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်တွင် သူသည် ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရခဲ့ပြီး လက်ရှိ သူ၏ ကြွယ်ဝမှုမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၄၂၀ ဖြစ်သည်။
အက်ရှင်ဇာတ်ကောင်များနှင့် လူသိများသော အမေရိကန် သရုပ်ဆောင် ၊ ဒါရိုက်တာ မဲလ်ဂစ်ဘ်ဆင်သည် ၁၉၇၆ခုနှစ်ကတည်းက ပြဇာတ်များတွင်ပါဝင်ရင်း အနုပညာလောက ထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင်အဖြစ်သာ မက ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ပါ အောင်မြင်သူဖြစ်သည်။ သူသရုပ်ဆောင်သည့် Braveheart နှင့် The Man WithoutaFace ဇာတ်ကားများက လူသိများသလို ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံးဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်သည့် Hacksaw Ridge ကိုလည်း ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် စာရင်းအရ သူ၏ ကြွယ်ဝမှုမှာ ၄၂၅သန်း ဖြစ်သည်။
ဟောလိဝုဒ်၏ ထင်ရှားသော မင်းသား ၊ ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု ၃ဆု ၊ အော်စကာ ၂ဆု ရရှိခဲ့သည်အထိအောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ O Brother, Where Art Thou? ၊ Ocean’s Eleven ၊ Up in the Air ၊ Three Kings နှင့် Syriana စသည့်ဇာတ်ကားများမှာ သူ၏ လူကြိုက်အများဆုံး အအောင်မြင်ဆုံး ဇာတ်ကားများဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်သိပ်မရိုက်တော့သော်ငြား အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် အောင်မြင်နေသူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် စာရင်းအရ သူ၏ ကြွယ်ဝမှုမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ဖြစ်သည်။
တွမ်ခရုစ်၏ အမည်ကို ကြားမိလိုက်သည်နှင့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုများ၊ အဝေးပြေးလမ်းပေါ်တွင် ကားအပြိုင်မောင်းရင်း အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်နေမှုများ၊ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှ ခုန်ချပြီး စွန့်စားတိုက်ခိုက်မှုများကို မြင်ယောင်မိလာမည် ဖြစ်သည်။ အက်ရှင်မင်းသား တစ်လက်အဖြစ် အထူးအောင်မြင်ခဲ့သည့် ခရုစ်သည် ရိုက်ကူးဖူးသမျှ ဇာတ်ကားအားလုံးအနက် အရေအတွက် ၂၀ ကို ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကျော်စီ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ဖူးသည့် မှတ်တမ်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ၎င်းသည် Top Gun၊ Mission Impossibleတို့ကဲ့သို့ အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းများအပြင် Rain Man၊ Eyes Wide Shutတို့ကဲ့သို့ Drama ဇာတ်လမ်းများ၌ပါ ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်ပြခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဟောလိဝုဒ် ဒါရိုက်တာများကမူ ခရုစ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အဆုံးအရှုံး မရှိရန် အာမခံချက် တစ်ခုအဖြစ် ယူဆလေ့ ရှိကြသည်။ ၎င်းသည် ဒေါ်လာသန်း ၅၇၀ မျှ ချမ်းသာနေပြီ ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးအနေဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု ကဏ္ဍတွင် တွမ်ခရုစ်ထက် ရှရွတ်ခန်းက သာလိမ့်မည်ဟု ယူဆသူ များများစားစား မရှိနိုင်လောက်ချေ။ သို့သော်လည်း ယင်းအချက်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်လောက၏ မီးရှူးတန်ဆောင်သဖွယ် ဖြစ်နေသော မင်းသားသည် အချစ်၊ အလွမ်း၊ အကြမ်း၊ အမြူး ဇာတ်ရုပ်မျိုးစုံဖြင့် ဘောလီးဝုဒ်၏ လူကြိုက်အများဆုံး ဇာတ်ကားကြီး ၅၀ ကျော်၌ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ခန်း၏ အောင်မြင်မှု ပုံရိပ်သည် ဘောလီးဝုဒ်တွင်သာ မကဘဲ တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာထိ ကျယ်ပြန့်လာအောင် ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ခန်းသည် ပရဟိတ လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးအနေဖြင့်လည်း လူသိများပြီး လူသားအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများစွာတွင် ပါဝင်ကူညီလေ့ရှိသည်။ Newsweek မဂ္ဂဇင်းက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဩဇာအကြီးဆုံး လူပုဂ္ဂိုလ် ၅၀ စာရင်း၌ ထည့်သွင်းရွေးချယ်ခဲ့ဖူးသော မင်းသားသည် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာသန်း ၆၀၀ မျှ ကြွယ်ဝချမ်းသာကြောင်း သိရသည်။
( တချို့စာရင်းများတွင်တော့ ဂျယ်ရီဆိန်းဖဲလ် ကို နံပါတ် ၁ အဖြစ်ဖော်ပြကြသည်။ သူ၏ ကြွယ်ဝမှုမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၉၂၀ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆိန်းဖဲလ် သည် ရုပ်ရှင်မင်းသား ၊ ဒါရိုက်တာဆိုသည်ထက် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းများ ၊ စီးရီးများ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရင်း ကြွယ်ဝလာခဲ့သူဖြစ်သည့်အတွက် ဒီစာရင်းတွင် မထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။)
Tags: world actors